Golaha Shacabka oo dib u dhigay kulankiisa 33-aad oo lagu soo xiri lahaa Kalfadhiga 4-aad – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo dib u dhigay kulankiisa 33-aad oo lagu soo xiri lahaa Kalfadhiga 4-aad
Kulan ka mid ah kulamada caadiga ah ee Golaha Shacabka, oo ay ahayd inuu maanta ka dhaco Xarunta Golaha, ayaa dib u dhacay. Sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha, waxa uu kulankaas dhici doonaa Isniinta, oo ku beegan 14-ka Janaayo, 2019. Kulankan Golaha, oo ah kii 33-aad, waxa uu baaqanayaa maalinkii 6-aad.
Kulanka maanta baaqday waxaa looga doodi lahaa, laguna meel-marin lahaa Hindise Sharciyeedyo Golaha horyaalay wax badan, oo qaarkood soo maray aqrintii ugu dambeysay, laakin aan wali loo qaadin cod. Inta uusan Isu-imaatinkan Golaha dib u dhicin ayuu Xildhibaan Sadiiq Warfaa ku yiri Kalfadhi “Kulanka berri waxaa looga hadli doonaa laba ajande, oo muhiim ah, sida (Hindisaha) Sharciga Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka iyo (Hindisaha) Sharci ku saabsan Bangiga Dhexe ee Soomaaliya”.
Kasakow Hindisayaasha uu Goluhu uga doodi dooni kulankiisa Isniinta, waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqi doono inuu xirmay Kalfadhigii 4-aad ee Golaha, oo furmay 10-kii September ee 2018-kii. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa kukankii 31-aad ee Kalfadhigan (29/12/2018) ka yiri “kalfadhigaan afaraad waa kii ugu shaqadda badnaa, waayo waxaan meel marinay ilaa 4 sharci oo dalka muhiim u ah, halka sadaxdii kalfadhi ee ka horaysay aan meel marinay 3 sharci”.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isaguna 1-dii Janaayo ee sanadkan, isagoo saxiixaayey Sharciga Naafada Qaranka, yiri “Sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan laba sharci bis ayaan saxiixay, waxaana sugeynay intaas iyo in ka badan”. “Waxaan ka codsanayaa Golaha Shacabka ee sharafta leh iyo Golaha Aqalka Sare in inta hartay ay si dhaqsiya iigu soo gudbiyaan, oo uu ugu horeeyo (Hindisaha Xeerka) Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida” ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa raaciyey.
Senator Axmed Nadiir: waan soo dhaweynayaa Guddiga uu magacaabay Reysal Wasaaraha
Xildhibaan Colaad: Waa in aysan dhalinyaradu isku koobin shaqada dowladda oo kaliya